Ma taqaanaa sida loo arko backlinks of website ah oo ka fiiri?
Backlinks had iyo jeer waxay ahayd mid muhiim ah oo mid ka mid ah qaybaha ugu saameynta leh ee fikradda dhammaystiran ee Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO). Hadda, fursadda ugu fiican ee aad ku leedahay Webka waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid astaanta dhabarkaaga.
Maxaad u ogaaneysaa sida dib loogu eego bogga internetka? Maxay tahay sababta ay u hubin lahaayeen inay had iyo jeer sameeyaan waqti deg deg ah? Sababtoo ah ku raaxeysiga faa'iidooyinka weyn ee booska darajada sare ee raadinta waxay u baahan tahay xogtaada dhabarka si loo ilaaliyo caafimaad leh. Dhab ahaan, qof kasta oo webmaster ah iyo milkiilaha internetka waa inuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo dib u eegis tayo leh si uu u galo boggooda internetka ee loogu talagalay isbeddelada joogtada ah ee darajada sare ee Google ee algorithm. Sababtaas awgeed waa inaad ogaataa sida loo arko backlinks of website ah si ay u sameeyaan jeeg audit ah oo jadwal ah
- kelley blue book for machinery.
Habkaasi, waxaad mar walba dareemi kartaa in website-kaaga liiska xulashada uu si fiican u socdo. Haddii aadan haysan xirfado ku filan iyo waayo-aragnimo wax ku ool ah si aad u dhisatid astaanta dabeecada tayada leh ee caafimaad leh, marka la eego ilaalinta waqtiga oo dhan - markaa waxaad joogtaa goobta saxda ah. Hoosta waxaan ku socdaa si aan kuu tuso siyaabo sahlan oo ah sida dib loogu arko boggaga internetka oo kormeerka saxda ah - sida badeecada aqoonyahanka dhabta ah. Sidaa oo kale, waxaad awood u yeelan doontaa in aad si xooggan u saarto waxyaabaha ku haboon ee Google u arkaan. Waxaan rumaysanahay in mid ka mid ah qalabka internetka ee soo socda uu kuu caawin doono:
Google Tools Tools
Gaar ahaan, weydiinta Google wuxuu noqon karaa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu fahmi karo arag backlinks of website - si toos ah laga eego aragtida mashiinka raadinta laftiisa. Xaqiiq ahaan, Qalabyada Google Websaytiyuhu waa qaab-dhismeed "hoose" oo bilaash ah oo lagu heli karo si ay kaaga caawiso inaad kormeerto boggaaga iyo astaankiisa guud. Intaa waxaa dheer, qalabka internetka ayaa noqon lahaa mid aad u faa'iideysanaya webmaster-ka casriga ah iyo inta kale ee bilowga ah ee aan aqoon SEO.
Qaylo dhaan ah
Nooca aasaasiga ah ee Qaylada Qaylada waxaa laga heli karaa xannibaad furan oo bilaash ah. Laakiin waxaad kaliya ka ogaan doontaa fursadaha ugu sarreeya ee barnaamijkan aadka u shaqeynaya ee hoos imaanaya qorshaha rukumada lacagta loo qoondeeyey meel ah qiyaastii 150 bucks sannadkiiba. Adiga ayaa go'aan ka gaaraya - laakiin waxaan helay xitaa aasaasiga aasaasiga ah ee xadidaadaha si caqligal ah, saaxiibtinimo si aad u socoto oo aad u isticmaasho si aad u isticmaasho. Way igu fududayd inaan kormeero xiriiriyeyaal iyo horumarka guud ee sarreeya - oo kaliya soo dhoofinta dhammaan xogta u baahan in si dheeraad ah loo tixgeliyo Excel.
Waa qalab farsameed oo casri ah, oo badanaa ay doorbidaan websaydhada xirfadlayaasha ah, iyo sidoo kale kuwa doonaya in ay haystaan sawir dhammeystiran oo ku saabsan ganacsiga internetka ee ay socdaan. Anigu waxaan helnay qalabkan oo aan faa'iido u lahayn oo keliya SEO-ga laakiin kordhinta dijitaalka iyo xayeysiisyada xayaysiinta si ay uga baxaan tartanka. Waxa aan la yaabay in Shirkadda Semalters ay albaabka u furi karto kormeerka suuqa nool iyo kormeerida kaliya ma ahan horumarinta boggeyga laakiin sidoo kale jagooyinka guud ee aan ka soo horjeeda suuqa - waxay heleen natiijooyinka ugu caansan si ay u noqdaan kuwo u gaar ah, iyo sidoo kale qaladkooda iyo qaladkooda iska ilaali inaad si sax ah u xakameyso.